Ny hetsika farany nataon'i Apple dia toa manamafy ny fanaraha-maso glucose ao amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny hetsika farany nataon'i Apple dia toa manamafy ny fanaraha-maso glucose ao amin'ny Apple Watch
Efa hatry ny ela isika no niaraka tamin'ny tsaho momba ireo fiasa vaovao azon'ny Apple Watch ampidirina ao. Miresaka momba ny mpanara-maso glucose isika. Miaraka amin'ity fampahalalana etsy ambony ity Toa hita fa tena matotra ny tsaho. Tsy ny asan'ny orinasa fahatelo ihany, fa tsy ny fihetsik'i Apple manokana. Raha ny marina ny hetsika farany nataonao toa manamafy fa hanana izany metatra vaovao izany amin'ny fiambenana isika.
Efa imbetsaka izahay no niresaka momba ny fahafahan'ny Apple Watch miasa ho mpitsabo tsy miankina. Ankoatra ny tsy fahaizany manasitrana, dia manao zavatra maro izay mahasoa ny fahasalamantsika. Manakana antsika tsy hanana aretim-po, manampy antsika raha sendra lavo isika, mitazona fidiovana madio tanana ... sns. Ny zavatra manaraka tadiavin'i Apple dia ny manampy antsika hifehy ny haavon'ny glucose ao amintsika ary toa matotra be izany.
Tsy noho ny vaovao fotsiny fa izy ireo dia efa tonga mialoha momba an'ity haitao vaovao ity, raha tsy izany satria tsy maintsy jerentsika izao Apple izao nandefa fanadihadiana teo amin'ireo mpampiasa Apple Watch ary nanontany azy ireo raha mampiasa app izy ireo hanarahana ny fahazaran-tsakafo, ny fanafody ary ny haavon'ny glucose amin'ny ra.
Pikantsary iray amin'ny fanadihadiana dia nozaraina tamin'ny 9to5Mac avy amin'ny mpamaky Breziliana iray, izay nahazo izany tamin'ny mailaka azy. Ny fanadihadiana dia misy fizarana natokana ho an'ny toetra mampiavaka ny fahasalamana, izay nanjary teboka fivarotana lehibe an'ny Apple Watch hatramin'ny nanombohany.
Taorian'ireto fanontaniana ireto dia mametraka fanontaniana ihany koa i Apple momba ny fampiharana an'ny antoko fahatelo hitantanana angona data. Ny fanadihadiana dia manolotra safidy amin'ny fampiasana fampiharana an'ny antoko fahatelo amin'ny fanarahana fanatanjahan-tena, fanarahana ny fahazarana misakafo (ao anatin'izany ny hydration sy ny sakafo mahavelona), ary ny fitantanana fikarakarana ara-pahasalamana hafa (toy ny fanafody sy ny haavon'ny angovo). Glucose amin'ny ra).
Fantatray fa ireo fanadihadiana ireo dia nanompo ny orinasa tamin'ny fotoana taloha teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ohatra amin'ny fanesorana ny charger ao amin'ny iPhone 12 vaovao sy fitaovana hafa. Azontsika atao ny milaza fa loharano tena tsara io ary izy io mihoatra ny mety fa manana an'io metatra glucose io isika amin'ny Apple Watch 7. Ny tsy fantatsika dia hoe raha toa ka fanavaozana rindrambaiko na fitaovana io. Antenaina fa izy no ho voalohany ary noho izany ny sisa amintsika dia afaka mandray soa avy amin'izany ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny hetsika farany nataon'i Apple dia toa manamafy ny fanaraha-maso glucose ao amin'ny Apple Watch
Apple Developer Academy handray ny tranom-pirenena voalohany an'ny Detroit
Ny MacBook Air manaraka, amin'ny loko isan-karazany toy ny iMac vaovao